Sekudlulile iminyaka engaphezu kweyishumi kusukela ukuwa kuka-Alla Pugacheva kunye noFilip Kirkorov, kodwa umshado wabo usengaphansi kwengxoxo. U-Alla Borisovna ngokwakhe uyavuma ukuthi isinqumo sakhe sokushada nomculi osemusha sihlobene nomlando wamanga.
Ngokusemthethweni, lo mbhangqwana ushade iminyaka eyishumi, kodwa empeleni i-prima donna yayinonyaka wokuthi "umndeni ujabule".
Namuhla uPugacheva uyavuma ukuthi akaqondi ukuthi wayengenza kanjani isinyathelo esinjalo ngokuxhumanisa impilo yakhe nendoda engathandanga lutho. U-Alla Borisovna utshele izintatheli ukuthi umshado wakhe noKirkorov ulandelwe indaba eyinkimbinkimbi yangempela. Umculi wayehlukana nomyeni wakhe wangaphambili, u-Yevgeny Boldin. Ukuba nesimo sengqondo esesabekayo, u-Alla Pugacheva ngaphambi nje kokuba imifanekiso ifungise owokuqala oyombiza ngosuku olulandelayo, njalo ukusiza. Ngalowo obiza okwesibili, inkanyezi isifungo sokuba yizinsuku zonke izinsuku zakhe, futhi kanye nalowo ozozinikela ukuze ashade ngolunye usuku, umlingisi uthembise ukuhlala kuze kube phakade.
Ngosuku olulandelayo, owokuqala ukubiza, njengoba kulula ukuqagela, nguFiliphu Kirkorov. Bese kulandelwa uchungechunge lwezenzakalo ezingavamile:
Ngathi kimi: "Kulungile, ngizosiza." Futhi owesibili owambiza, wayenguye, isifo. Wathi: "Mhlawumbe sizoya esitolo sokudlela?" Ngaphendula: "Angikuphi nomunye nawe." Ngakho walila okwesithathu wathi uYudashkin wayenathi. Ngavuma. Saya esitolo sokudlela, futhi uKirkorov wathi: "Ngicela, ngishade, ngivumelane, ngivumelwane kakade emshadweni."
Kakade ngosuku lwesibili emva komkhosi womshado u-Alla Pugacheva waqaphela ukuthi wenza iphutha elikhulu. Kodwa lo mculi wanquma ukukhuthazela, ikakhulukazi ngaphambi kokuba anikeze isithembiso sokunakekela uFiliphu umama wakhe ogulayo.
Manje u-Prima donna uyavuma ukuthi uFiliphu Kirkorov wayengumbukiso walokho engakuthandanga empilweni:
Yonke impilo yami angizange ngithande lolu hlobo lwabantu, lolu hlobo lwezenzo, angizange ngithande konke okukulo futhi manje angithandi. Kufana - Angizange ngikuthande, kepha ngenza i-jerk enjalo. Angazi ukuthi kwenzekani ebuchosheni bami ...
U-Olga Buzova wanquma ukudubula kwesithombe esifanele kanye nezinguquko ezinkulu
U-Julia Savicheva udumaze abalandeli ngamazwi nge talenta kaBuvoy
U-Alla Pugacheva uthumele ividiyo nendodana yakhe uHarry ku-Instagram
Massage ebusweni emva kokujola kweBotox
Anyanisi kukhona umthombo wamavithamini
Ukuphumula nokwelashwa eCzech Republic - uKarlovy Vary
Izincwadi Ezinhle kakhulu zikaStephen King
I-Risotto enezilwane zasolwandle
Isinkwa sePita nge-salmon ebomvu
Izinhlobo ezahlukene zothando. Futhi unjani uthando?
Indlela yokwenza ubuhlungu besifuba
Izendlala zesaladi ngehhafu
Indlela yokuthuthukisa ubugovu obuphephile
Okudingayo ukwazi uma uya echibini